Revision as of 13:32, 19 August 2019 (view source)
==Motlanthe an Revelation==
In November 2018, when he appeared before the Motlanthe Commission, Kunaka claimed that following [[Robert Mugabe]]'s loss to [[Morgan Tsvangirai]] in the first round of the presidential election, he led violence against the MDC-T that saw many abducted and murdered. Kunaka claimed that as part of the Zanu PF youths, they met with members of the military at the Zanu PF headquarters basement where they received instructions to defend the revolution after the late MDC president Morgan Tsvangirai had won the election against former President Robert Mugabe.
In November 2018, when he appeared before the [[Motlanthe Commission]], Kunaka claimed that following [[Robert Mugabe]]'s loss to [[Morgan Tsvangirai]] in the first round of the presidential election, he led violence against the MDC-T that saw many abducted and murdered. Kunaka claimed that as part of the Zanu PF youths, they met with members of the military at the Zanu PF headquarters basement where they received instructions to defend the revolution after the late MDC president Morgan Tsvangirai had won the election against former President Robert Mugabe.
“There is a meeting that took place in the Zanu PF headquarters basement. Zanu PF had lost elections in 2008, we were called, especially me by the military personnel and I was told that Zimbabwe will not have a power transfer through a pen and ballot paper. I was told to go and defend the revolution, I was told to do anything and you know what I did,”<ref name="newsdaynov2018">Blessed Mhlanga, [https://www.newsday.co.zw/2018/11/ex-zanu-pf-terror-leader-spills-the-beans/ Ex-Zanu PF terror leader spills the beans], ''NewsDay, Published:22 Nov 2018, Retrieved:23 Nov 2018''</ref></blockquote>